Puntland oo xidhay Idaacad Maxali ah oo ka shaqaysa Boosaaso – Radio Daljir
Oktoobar 6, 2012 9:18 b 0
Bossaso, Oct 06 – Idaacadda Horseed Media oo ka mid ah idaacadaha madaxabanaan ee ka howlgalla gobolka Bari, gaar ahaana magaalada Bosaaso ayaa maanta irdaha la isugu dhuftay.
Sida agaasimaha Horseed Media C/qani Xasan Dhegjar uu ku sheegay shir jara’id xarunta idaacadda ay ku leedahay magaalada Bosaso uu ku qabtay waxaa maamulka idaacadda lasoo gaarsiiyay warqad kasoo baxday laamaha amaanka ee gobolka Bari oo faraysa in idaacadda la xirro.
Waxaa uu sheegay agaasimaha Horseed Media inay u hogaansameen go’aanka kasoo baxay laamaha amaanka ee gobolka Bari,ayna idaacadda hawada ka saareen ilaa ammar dambe.
“Puntland waxaa ay leedahay dastuur, mana ogin wax sharciga Puntland kasoo horjeeda oo aan siidaynay”ayuu yiri cabdiqani Xasan Dhegjar.
Macadda sababaha keenay in idaacadda irdaha la isugu dhufto, dowladda Puntland ayaa dhankeeda soo saarin wax war ah oo la xiriira sababta idaacadda loo xiray.
Wasaaradda warfaafinta Puntland iyo saxaafadda gobolka Bari ayaa dhowaan shir ay ku yeesheen xarunta dowladda Puntland ee magaalada Garowe waxaa ay isku afgarteen xiriir wanaagsan oo wasaaradda ay u furi doonto dowladda Puntland iyo qaybaha kalle duwan ee warbaahinta Puntland ka howlgala.